Ny veneer aluminium hyperbolic dia misy fiatraikany amin'ny fisehoana ivelany, afaka mamorona trano manokana izy io, ary azo volavolaina sy alefa arakaraky ny takian'ny mpanjifa isan-karazany hahatratra ny fepetra takiana amin'ny fananganana azy manokana. Ny veneer aluminium miolakolaka roa sosona dia mandray ny rafitra anatiny tsy misy rano sy ny famehezana ny tombo-kase, mba hiantohana ny fahombiazan'ny rano tsara indrindra amin'ny lafiny lehibe kokoa. Izy io koa dia azo ampiasaina eny ambonin'ny veneer alim-borona hyperbolic Mamafa loko maro loko mba hanatsara kokoa ny fijerin'ny maso. Ny famokarana veneer aluminium hyperbolic dia sarotra kokoa, ary ny fepetra takiana amin'ny fahamarinan'ny masinina sy ny fepetra takian'ny mpiasa teknika dia somary avo lenta, noho izany ny veneer aluminium hyperbolic dia manana atiny teknika matanjaka.
Ny veneer vita amin'ny alim-bary vita amin'ny hazo 4D dia vita amin'ny takela aluminium alim-borona avo lenta avo lenta, mifangaro amin'ny haingon-tsoratry ny lamina iraisam-pirenena. Ny lamina dia avo lenta sy tsara tarehy, ny lokony sy ny volony dia toy ny olona velona, ​​ny lamina hentitra sy mahazaka akanjo, ary tsy misy famoahana gazy formaldehyde, tsy misy poizina ary manimba, amin'izay tsy mila miahiahy momba ny fofona sy ratra amin'ny vatana vokatry ny loko sy ny lakaoly aorian'ny haingo. Io no safidy voalohany amin'ny haingon-trano avo lenta.
Ny loko be dia be dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny trano maoderina amin'ny loko. Miaraka amin'ny firakotra PVDF, milamina ny loko nefa tsy mihena, .Ny fahaiza-manaporofo tsara sy ny fahanterana dia nahatonga azy hiaritra fahasimbana maharitra avy amin'ny uv, Rivotra, orana asidra ary gazy mandany Ankoatr'izay, ny firakotra PVDF dia sarotra ho an'ny raharaha mandoto, noho izany dia afaka hadio mandritra ny fotoana maharitra izy ary mora tazomina. Ny lanja mavesatra, tanjaka avo, fahaizana manohitra ny fametahana rivotra. Miaraka amina rafitra fametrahana tsotra ary azo volavolaina izy io amin'ny endrika isan-karazany toy ny miondrika, mivalona maro. Tena tsara ny vokatr'ilay haingo.
Ny veneer aluminium vita amin'ny perforated dia vokatra voadio amin'ny veneer aluminium. Ny milina fanodinkodinana fanaraha-maso mandeha ho azy nafarana avy any Alemana dia afaka mahatsapa mora ny fikarakarana endrika lavaka be pitsiny amin'ny famonoana aluminium veneer, mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny endrika lavaka isan-karazany, ny savaivony lavitry ny lavaka tsy miova ary ny lavaka miova tsimoramora amin'ny famonoana alimina aluminium, miaraka amin'izay koa, miantoka ny maha-marina ny fanodinana totohondry, mahafeno ny fenitra avo lenta amin'ny famolavolana aritrano hatramin'ny faratampony lehibe indrindra ary maneho tanteraka ireo hevitra vaovao momba ny famolavolana maritrano.
Ny Aluminium Corrugated Composite Panel dia antsoina koa hoe tontonana mifangaro mitafo aluminium, mampiasa AL3003H16-H18 fitaovana firaka vita amin'ny aliminioma, miaraka amin'ny hatevin'ny alimina 0.4-1.Omm, ny hatevin'ny alimina ambany 0.25-0.5mm, ny hatevin'ny fotony 0.15-0.3mm. fitaovana famokarana mandeha ho azy eo ambanin'ny fitantanana ERPsystem. Ny endrika onja amin'ny rano dia vita amin'ny alàlan'ny fanerena mangatsiaka amin'ny tsipika famokarana iray ihany, amin'ny alàlan'ny fampiasana thermosetting rafitra roa resin mifatotra amin'ny tarehy sy ny ambany aluminium amin'ny endrika arc, mampitombo ny tanjaka adhesive, manana tontonana metaly adhesion tena tsara. milamina ary mizara fiainana mitovy amin'ny fananganana.